Theatern'Stationntanet Na-ewebata Freelọ Ọrụ Ntanetị Ọgbara Ọhụrụ - pisklak.net
Theatern’Stationntanet Na-ewebata Freelọ Ọrụ Ntanetị Ọgbara Ọhụrụ
Caslọ Casinos na-enwe obi ụtọ ịkpọsa iwebata ọdụ ụgbọ eletrik 30 (EV) na-ebugharị ọdụ na ụlọ ịgba chaa chaa isii ya na ndagwurugwu Las Vegas. Companylọ ọrụ ahụ ejikọtara na Rexel Energy Solutions iji wụnye ChargePoint CT4000 ụlọ ọrụ na-ebugharị na-egosipụta ọdụ ụgbọ mmiri abụọ nke bụ ọdụ kachasị elu nke Ọkwa twon’ahịa ma nwee ike ịkwụ ụgwọ ụfọdụ ụgbọ ala na-erughị awa anọ. Nchaji ga-adị mma maka ndị ọbịa niile na-eji ChargePoint App. Charginglọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ọhụrụ na-anọchi ọdụ ụgbọ ochie EV ochie ma nwekwuo ikike maka ụgbọ ala ndị ọbịa.
“Na mgbakwunye nke ụlọ ọrụ eletriki ụgbọ eletriki na-akwụghị ụgwọ na ebe anyị na-anaghị akwụ ụgwọ mgbe niile, ebe anyị na-adọba ụgbọala, anyị na-enye ndị ọbịa anyị ihe ọzọ only ha ji aga ileta ọdụ cha cha ọdụ,” ka Bob Finch, Onye isi na-ahụ maka ndị isi, ọdụ Casinos kwuru.
Lọ ọrụ ntanetị 30, nke nwere ike ịnabata ụgbọ ala 60, dị ka ndị na-esonụ:
Red Rock Casino Resort Spa East Garage Valet (2) East Garage Chairman Lot (2) East Garage Public (2) West Garage Valet (2) West Garage Chairman Lot (2) West Garage Public (2) Green Valley Ranch Resort Spa Casino Hotel Valet (2) Casino Valet (two ) 215 Garage Public (2) South Garage Onye isi oche Lot (2) South Garage Public (2) Palace Station Hotel & Casino Parking Garage Chairman Lot (2) Boulder Station Hotel & Casino Parking Garage Public (two ) ) Santa Fe Station Hotel & Casino Sunset Station nkwari akụ & Casinolọ mposi Toilet Ọha (two )